प्रहरी नै पैंचो ल्याएर खाना खान बाध्य « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
प्रहरी नै पैंचो ल्याएर खाना खान बाध्य
बझाङ, बैशाख २४ : बझाङको उत्तरी सीमास्थित धुली प्रहरी चौकीमा गत आइतबार बिहान प्रहरीहरुको फूर्तिफार्ती बेग्लै देखिन्थ्यो । एक जना प्रहरी जवान खरको झुप्रोमुनी भान्सामा भात पकाउँदै थिए । कोही आलुको तरकारी काट्दै थिए । एक जना सिलौटामा मसला पिस्दै थिए ।
प्रहरीका अनुसार चम्किलो हुनुको कारणबारे जिज्ञासा राखिनसक्दै जवान सुराज कुँवरले फ्याट्ट भनिहाले, ‘दुई छाकपछि भान्सामा भात पाक्दै छ । सब मुख मिठ्याएर बसेका छन् ।’
गाउँभरि खोज्दा पनि चामल पैंचो नपाएपछि प्रहरीको भान्सामा अघिल्लो दिन दुई छाक भात पाकेको रहेनछ । उनीहरुले चाउचाउ खाएर रात बिताउनुपरेछ । आइतबार बिहान वडाध्यक्षको घरबाट एक बोरा चामल पैंचो खोजेर ल्याएपछि भात पाकेको रहेछ । यो समाचार वसन्त प्रताप सिंहले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
यो कस्तो बेथिति ? नदी र सडक नभएको ठाउँमा पक्की पुल
बाँके, भदौ ३ : नदी छैन, सडक पनि छैन । नदी र सडक नभएको ठाउँमा
भक्तपुरमा असारको कामले सडकको अवस्था नाजुक
मध्यपुरथिमि, २ भदौ: वर्षा शुरुभएसँगै भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका बालकोट–सिरुटार र बालकोट–चाँगाथली जाने सडकको अवस्था नाजुक
घरटहरा भत्काएपछि भोलीबाट नगरकोट बन्द हुने
भक्तपुर, १ भदौ : भक्तपुरमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा रहेको साना तथा मझौला व्यवसायीले नगरकोटलाई
काभ्रेमा तामाङ प्रसारण दिवसमा नेवा ताम्सालिङका लागि सम्वाद
काभ्रे, भदौ १ : नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) काभ्रे शाखाले आइतबार २० औं